Debaaldegga dhamaadka xilli dugsiyeedka oo ilaah iyo Ciise masiixi lagu xusayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Debaaldegga dhamaadka xilli dugsiyeedka oo ilaah iyo Ciise masiixi lagu xusayo
Diimaha iyo iskuulka
La daabacay onsdag 4 februari 2015 kl 13.56
Xisbiyada Alliansen oo taageero ka helaya xisbiga Sverigedemokraterna ayaa doonaya in ay suurogeliyaan in dhamaadka xilli dugsiyeedka lagu qabto kaaniisadaha iyadoo la suurogalinayo in inta ay socoto debaaldegga dhamaadka xilli dugsiyeedka lagu soo qaadan karo ilaah, ciise iyo weliba heeso diini ah.
Xisbiyada ayaa doonaya in ay arrintan suurogaliyaan laga billabo bisha abriil gu’gan fooda nagu haya. Christer Nylander waa xildhibaan ka mid ah xisbiga Folkpartiet ahna guddoomiye ku xigeenka guddiga waxbarashada ee baarlaamaanka, ka mid ah dadka gadaal ka riixaya wax ka badelidda sharciga iskuulka si arrintan loo suurogeliyo. Waxuu yeri diinta masiixiyadda waaqayb muhim ah oo ka mid ah dhaqanka Sweden, howlsha iskuulkana ay ka mid tahay in ay xanaaneeyaan oo dhowran dhaqankan.
Xisbiyada Alliansen ayaa doonaya meel marinta arrintan in ay la kaashadaan xisbiga Sverigedemokraterna. Stefan Jacobsson oo xildhibaan Sverigedemokrat ah kana mid ah guddiga waxbarashada ee baarlamaanka ayaa sheegay in xisbigiisa soo dhaweynayo tillabadan, isaga oo yeri Sweden waa dalka kun sanno diinta masiixiga heystay, waxaana qabnaa in dhaqankan ay tahay in aan dhowrno si uu usii jiro, haddii iskuulada dooonayaa in ay dabaaldegga ku qabsandaan kiiniisadaha loo suurogeliyo.
Ururada Cilmaniga ah
Maanta sida uu qabo sharciga iskuulka ee Sweden haddii iskuulka dhamaadka xilli dugsiyeedka ku qabto kaniisada waa mamnuuc in lagu soo qaado wax ku sabsan diin iyo caqiido. Sida in laga sheekooyo ilaah iyo ciise masiixi, balse imminka ayaa Alliaansen iyo Sverigedemokraterna qorsheynayaan in sharcigas mamnuucaya meesha laga saaro. Iyadoo laga billabo gu'ga foodna nagu soo haya la hergelinayo sharci ogalaanaya in kaniisadaha marka lagu qabto dhamaadka xilli dusgiyeedka lagu soo qaato wacdi, heeso diini ah, iyo welib illah iyo ciise masiixi.
Christer Sturmark oo ah guddomiyaha daladda ururada cilmaaniga ah ee daneeya sharuuc diin ka madax banaan ayaa ku eedeeyey xisbiyada Alliansen in ay arrintan uga dabo dhilifaynayaan xisbiga Sverigedemokraterna:
- Waxaa baarlamaanka ka jira xal xisbi oo aan dooneynin qaran ku dhisan sekular, xisbigaasna waa Sverigedemokraterna. Baragramkooda xisbi ayey ku qoran tahay in dowladda aysan ahaanin mid diin ka madax banaan. Haddaba xisbiyada Alliansen; waxaad qabaneysiin howlsha Sverigedemokraterna markey timaado arrintan. Waayo waxaad dooneysiin in aad hirgelisiin sharci ka dhigaya qaranka mid aan sekular aheyn.
- Iskuul waajib ayuu ku yahay caruurta oo dhan,waxayna aheyd in uu ahaado meel ka caagan dhamaan caalaamadah diiniga ah, ayuu yeri.
Xildhibaan Christer Nylander ayaa sheegay in ujeedada wax ka badelidda sharciga ay tahay in la caddeyo wax uu qabo sharciga, balse aysan ujeedka aheyn in arddeyda qasab looga dhigo aadidda kiinsada si ay uga qayb galaan debaal degga dhamaadka xilli dugsiyeedka.
- Waxaan rabnaa keliya in aan cadeyno in ay OK tahay in kaniisada lagu qabto debaal degga dhamaadka xilli dugsiyeedka oo la qaado heesaha diiniga ah iyo weliba caqiida masiixiga.
Laakiin Christer Sturmark ayaa qaba in arrinta tahay mid kalo qaybsenaansho iskuulka, waxaa jira kara ayuu yeri fasal arddeyda dhigataa boqoolkii 40 yahiin muslimiin toban tahay yahuud, ayna caqli gal aheyn muslimiintana ku dabaal degaan masjidka, yahudana ku debaal deggto synogogada halka inta kale ku dabaal degeyso kiinsadaha, taas waxay keyneysaa kalo qaybsanaan ku timaada iskuulka, ayuu yeri.